Android ကိုသတိရခြင်း: Music Player3[APK] | Androidsis
Francisco Ruiz | | APK, Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, လဲ tutorial
ငါတို့နဲ့အတူပြန်လာ ၏လွမ်းဆွတ်အပိုင်း Android ကိုသတိရပါ o Android ကိုမှတ်မိခြင်း စပိန်သို့၎င်း၏ပကတိဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာ Android အတွက်ဂီတဖွင့်စက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုယူလာပေးမှာပါ။ ဒါကသင့်ကိုအကောင်းဆုံးသုံးဖက်မြင်ဂရပ်ဖစ်အတွက်အမှတ်တရများစွာကိုယူဆောင်လာမှာပါ။
၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်မရှိတော့ဘဲ၎င်းကိုခေတ်မမီတော့သည့် အချိန်မှစ၍ မွမ်းမံသေးသော်လည်း၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်တို့အားလုံးကိုမှတ်မိပြီးမျှဝေချင်သောအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော application တစ်ခု ဘာကြောင့်တီထွင်ခဲ့ကြတာလဲဆိုရင်သူဟာပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆက်ပြီးကြိုးစားနေသည်။
13Cube ဂီတဖွင့်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအရာများ (သို့) တေးဂီတဖွင့်စက် ၃ လုံးမျှသာ
1.1 Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှတေးဂီတဖွင့်စက်3ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ (ကြေးနန်းလိုအပ်သည်) ။
1.2 တေးဂီတဖွင့်စက်3ကိုပြင်ပ link မှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
3 Cube ဂီတဖွင့်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအရာများ (သို့) တေးဂီတဖွင့်စက် ၃ လုံးမျှသာ
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အသုံးချပရိုဂရမ်ဖြစ်သော်လည်းခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းကို Google Play စတိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Music Player3or3Cube တေးဂီတဖွင့်စက်သည် Android အတွက်ခေတ်ဟောင်းဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သည် အထူးသဖြင့် system အရင်းအမြစ်များနည်းသော Android terminal များတွင်၎င်းသည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။
လျှောက်လွှာ၏, ငါဒီ post ရဲ့အစမှာငါစွန့်ခွာကြောင်းပူးတွဲဗီဒီယိုတွင်ရှင်းပြသကဲ့သို့, က၎င်း၏ကြီးမားတဲ့မီးမောင်းထိုးပြထိုက်သည် cube တစ်ခု၏ပုံသဏ္graphicsာန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အယ်လ်ဘမ်များသို့မဟုတ်အနုပညာရှင်များကိုဖြတ်သန်းသွားစေနိုင်သည့်သုံးဖက်မြင်ရုပ်ပုံများ ငါတို့ Android ၏ဂီတစာကြည့်တိုက်တွင်ရှိသည်
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မြင်နိုင်သောအမြင် (သို့) အပိုင်းကဏ္ interface ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတစာကြည့်တိုက်ရှိသီချင်းများအားလုံးကိုအနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်ကြီးမားသောစာသားပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပြသသည် ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသော။
မင်းငါ့ကိုကြိုက်လျှင် Android နှင့် Android ကိုယခုသတိရ။ ယခု Google ပိုင်ဆိုင်သော operating system နှင့်စတင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်, ထို့နောက်သင်surelyကန်စင်စစ်တေးဂီတဖွင့်စက်၏အမည်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်လှုပ်နေသောဤလျှောက်လွှာကိုနှစ်သက်ကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Music Player3အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သင်၏ Android တွင်စမ်းသပ်လိုပါက၎င်းကို Android Oreo ဗားရှင်းများတွင်ပင်တပ်ဆင်ပြီးဖွင့်ရန်မည်သည့်ပြkindနာမျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားသောလျှောက်လွှာကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်လင့်များဖြစ်သည် ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း.
Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှ Music Player3ကို download လုပ်ပါ ဒီမှာနှိပ်ပါ. (ကြေးနန်းလိုအပ်သည်) ။
Music Player3မှဒေါင်းလုပ်ရယူပါ ဒီမှာကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြင်ပ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ကိုသတိရခြင်း: Music Player3[APK]